QAJAAR LA MID AH "DABEECAD" AMA KORAAN MOMORDICA - WARARKA
Maanta waxaan eegnaa hal warshad aad u qallafsan.
Waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, dhadhan aan caadi aheyn, waxaana loo yaqaan "geedka qadhaadh ee Chinese".
Intooda badan waxaa loo yaqaan 'Momordika' magaca qarsoodiga ah.
Si kooban u saabsan warshadda
Momordica, dhab ahaantii, waa magaca caamka ah ee tiro badan oo dhirta - canabkiina sanadlaha ah iyo geedka dilka ah.
Dhammaantood way ka duwan yihiin oo waxaan jeclaan lahaa in aan ka sheekeeyo nooc kasta oo faahfaahin ah, laakiin hadda waxaan kaliya danaynaynaa hal wakiil oo ka mid ah qoyskan.
Tani waa "Momordika Kokhinkhinsky", oo ku baahsan aagagga hoose, tusaale ahaan Indonesia iyo Shiinaha.
Bannaanka u badan u koraan warshad kaliya sababtoo ah muuqaal aan caadi ahayn. Iyo, waa la fahmi karaa.
Momordica waa muddo dheer, ilaa laba mitir, canab khafiif ah, qurxin leh caleemo qurux badan.
Inta lagu jiro ubax, on canabkiil ubax ubax huruud ah dhalaalaya on jirida khafiif ah, kuwaas oo leh caraf aad u fiican oo jilicsan. Laakiin, intaa in ka badan, miraha ay qiimeeyaan by jacaylka of exotic.
Wax yar ka dib pollination of ubax, cagaaran, sida haddii daboolay finanku, ugxan-abuurka ayaa la sameeyay, taas oo bilaabmeysa inay si degdeg ah u koraan. Marka ay dhererkeedu dhan yahay 10 sentimitir dhererkeed (oo ay taasi dhacdo in badan), midhaha ayaa billaabaya inuu buuxiyo midab jaalle ah. Iskudheellida, dildilaaca midhaha ee qaybta hoose iyo ugu dhakhsaha badan waxay sameeyaan saddex fareesho, dhirbaaxo leh, oo la barbardhigay miraha gaduudan oo ballaaran.
Laakiin, khudraddan waa la koray oo kaliya maadaama uu muuqaalka, laakiin sidoo kale sababtoo ah waa mid aad u dhadhan fiican leh! Caadi ahaan, miraha waxaa la goostay wax yar oo aan qaan gaadhin oo lagu qooyay muddo seddex illaa afar saacadood biyo qabow oo wanaagsan.
Tani waxaa la sameeyaa si looga saaro qadhaadh ay Momordica ku leedahay magaca - "Bitter Gourd". Ka dib barar, miro (u eg bocorka dhadhanka) inta badan la dubay.
Ama fuud, oo ay ku weheliso ubax, caleemaha yaryar iyo caleemaha. Qaar waxay jecel yihiin in ay ilaaliyaan miraha si ay ugu dabbaaldegaan xilliga qaboobaha.
Sidee ayaa momordica koray?
Habka ugu fudud ee lagu kori karo khudraddan waa iyada oo la adeegsanayo abuurka. Kaliya ku qoy iyaga xal daciif ah ee kaneecada, oo ku saabsan hal maalin kahor.
Ka dib markaa, ku rid sanduuq ama digirta peat ka buuxsamey isku dhafan.
Geedka qoyaanku waa qiyaastii hal mitir iyo badh. Bannaanka u khibrad leh ayaa lagula talinayaa in ay ku ridaan geeska, ka dibna la saydhaa dhulka, ku shub biyo diirran oo dabool leh polyetylene.
Waxaad illoobi kartaa iyaga dhowr maalmood, ka dib taas oo aad u baahan tahay si aad u ilaaliso ciidda qoyan, sugto miraha si ay u dhaafaan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee ay u noqoto mid diirran wadada, waxaanu ku tallaalnaa sprouts ee lagu koriyo oo ha iloobin in ay si fiican u biyo leeyihiin, iyo habeenkii si ay u buufiyaan biyo diirran. Sidoo kale, ciidda waa in la bacrimiyo si ay dhirtu u engegan dhulka dhulka saboolka ah.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo la xaqiijiyey oo la siinayo quudinta:
xalinta qashinka digaaga, ee saamiga "hal qayb oo qashin ah ilaa laba litir oo biyo ah";
xal mullein, oo leh saamiga "hal ilaa toban," siday u kala horreeyaan.
Mawduuca muhiimka ah waa momordica, waa geedka ubaxa, sidaa daraadeed isaga la shaqeeya, xirashada gacmo gashi iyo dhar dheer.
Dhibaato aad u adag (laakiin aan ahayn) ayaa gooynaya gogosha geedka hore ee qaangaarka. Sidaa darted, lifaaqa (ama, sida loo yaqaan "stepchild") waa la gooyaa oo ku ridi biyo diirran. Laba toddobaad gudahood ayuu xidid ku qaadan doonaa, bil kadibna waxaa lagu beeray dhulka.
Guud ahaan, ka saarista caleemaha dhinaca waa mid aad u muhiim ah haddii aad rabto inaad beerto dalagyo wanaagsan. Si dhirta loo soo saaro miraha badan ee suurtogalka ah, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dhammaan hababka qaybta hoose, taas oo ah, ilaa illaa konton mitir.
Caadi ahaan waxay ka tagtaa saddex jir, oo aan ka badnayn. Dhammaan caleemaha kor ku soo baxa ayaa la gooyaa kaddib marka miraha ugu horreeya la xiro.
Qodobbada waxtarka leh ee "goryaanka qadhaadh"
Dabcan, dhammaan sifooyinka khudraddan aan wali la baranin, laakiin waxaa jira sababo badan oo ay ku jiraan ubucda qadhaadh ee cuntadaada.
Waxaa cufan leh nafaqooyin. Cilmi-baaristu waxay muujisay in ay ka kooban tahay laba jeer ka badan beta-carotene, kalsiyum iyo potassium intii laga heli karro broccoli, isbinaajka iyo muuska, siday u kala horreeyaan.
Leaves iyo afkoda ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale wakiil anthelmintic wanaagsan. Haddii aad faleebo ka sameysid, waxay kaa caawineysaa hargabka, iyo sidoo kale nooca 2aad ee sonkorowga.
Seeds ayaa faa'iido leh sida duriinka. Sidoo kale, waxaa jira caddayn ah in ay leeyihiin saameyn faa'iido leh boogaha caloosha, iyo runtii, sida wakiilka anti-bararka.
Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka, warshadani ka caawin doonto daaweynta duumada, HIV iyo kansarka, laakiin cilmi baarista meelahaas ayaa hadda bilaabay.
Xaqiiqooyinka muhiimka ah waa juice momordica, waa sun u eg qaabka cayriin, sidaa daraadeed waa inaadan wax cunin, sidaa daraadeed waa inaadan cunin khudraddaas iyada oo aan la shaqayn.
Nasiib darro, qof kasta ma cuni karo khudradan.
Marka hore, waa inaadan wax cunin, haddii aad leedahay boog caloosha oo furan, waxaa jiraya fursad ay uga sii dari karto ubaxyada qadhaadhka ah.
Marka labaad, waxaa fiican inaadan abuurin abuurka carruurta iyo haweenka uurka leh. Jirka jirkiisa ma sameynaayo tijaabada noocaas ah, haweenka uurka lehna waxay kordhiyaan halista dhiciska. Tani waa dhif, laakiin waxay dhacdaa.
Inta kale, bocorka qadhaadh ee Shiinuhu waa faa'iido leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer laga dhaadhicin karaa goobta kaliya ee quruxda, ka dibna doorashada waa adiga.